​बदला लिने यही हो बेला ? « Jana Aastha News Online
​बदला लिने यही हो बेला ?
प्रकाशित मिति : २२ आश्विन २०७५, सोमबार १२:२८
सत्ताधारी नेकपाको गाँड कोराकोर राजनीतिक माछा बजारमा छरपष्ट छ । नेपालदेखि अमेरिकासम्म, सडकदेखि र सञ्चारसम्म तातेका छन् । सुकेलुतो कन्याउनुभन्दा पनि सजिलो र मज्जा त शत्रु आफ्नैलाई बनाउनुमा हुन्छ । सक्कली शत्रु भएन भने नक्कली तयार पारेर पनि प्रतिशोधको रसायन तयार पारिन्छ । गाली रित्तिएपछि शक्ति हत्याउन वा गुट तह लगाउन चुत्थो विकल्पस्वरुप फेरि मिलापको नाटक मञ्चन गरिन्छ । पुरानो माओवादीमा गोंगबु डिनर र धोबीघाट जमघट यस्तै नमूना थिए, कालान्तरमा एकातर्फ झगडा फच्छे भयो, अर्कातर्फ पार्टी फुट्यो ।
गालीको आविष्कार, गुटको घोचपेच, कटाक्ष, व्यंग्यवाण, हुर्मत काढ्ने शिक्षा लिनु छ भने नेपाली कम्युनिस्टलाई गुरु मान्दा हुन्छ । कम्युनिस्ट पार्टी पूर्ण मानवतावादको रक्षक हो तर नेतृत्वको व्यवहार हेर्दा तिनले सबभन्दा चर्को दुश्मन आफ्नै पार्टीभित्र खोज्छन्, देख्छन् ।तयार पार्छन् । अनि अक्करमा ठक्कर दिँदै सँगालेका तुषको बदला लिन्छन् । हुन त इख नभएको मान्छे र विष नभएको सर्पको के काम भन्ने गरिन्छ । तर, उच्च आदर्शमा रही पूर्ण मानवसमाजको कल्पना गर्ने नेपाली ‘कम्युनिष्टमै’ यो समस्या अझ बढी छ । तब के यो आदर्श कतै शक्ति आर्जनको भ¥याङ त होइन ? भन्ने हुन्छ । आलोचनात्मक चेत बोली पासो कि ! गल पासो ! सरकारी भूमिकाबाट च्यूत पारिएका वा ०५४ मा पार्टी विभाजनको पीडा खेपेका घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईजस्तै क–कसले थप भुक्तमान भोग्नुप¥यो ! अहिले पार्टी एकता गर्ने पुराना माओवादीले यो कुराको हेक्का राखेका छन् ? जनयुद्धका बेला वा पछि माले÷एमाले त्यागेर माओवादी बन्नेहरूको राजनीतिक हीनताबोध आगामी दिनमा कसरी देखिने हो, कुन्नि !
अहंकारको टकराहट सामन्तवादी संस्कृतिमा मात्र हुन्छ । तब नेताहरु आपूmलाई नेता नभई जिम्वाल, मालिक, भाग्यदाता सोच्ने गर्छन् । पार्टी कर्पाेरेट वा सिण्डिकेटमा फेरिएपछि शक्तिकेन्द्र चाकर उत्पादक कारखाना बन्छ । गुट राजनीतिमा भुक्तभोगीका अनेकौँ कथा–व्यथा होलान् । चुनावी टिकट, मन्त्री वा पुरस्कार, पदक वितरण र कार्यकारी पदको नियुक्तिमा नांगो चित्र र चरित्र देखिन्छ । हाम्रोजस्ता शक्तिसंस्कृतिमा पदक र पुरस्कार योग्यताको कसी होइनन् तर राज्यले तत् संस्थाले कसरी, कसलाई, कुन नजरियाले हेरेको छ वा आफूलाई सिँगारेरै तपाईंमा रहेको आलोचनात्मक चेत वा विद्रोहीपन ध्वस्त गराउन त चाहेको छैन ! भन्ने बुझ्दा हुन्छ । के नेकपाभित्रको तुच्छ खेल र इखको गुटीय व्यापारमा यसै वर्ष राष्ट्रपतिद्वारा प्रदान गरिने गणतन्त्र पदकमा सिफारिस र निर्णय भैसकेका नाम एकाएक काटिनु सामान्य विषय हो ? मानमर्दन, इख साधनाको गम्भीर संकेत र सन्देश होइन यो ?
०४८–५० ताका चार सारी र चार दाह्रीको नियन्त्रणमा कांग्रेस मात्र होइन, नेपाली राजनीति केन्द्रित छ भनिन्थ्यो । शालिन र भद्र भनिएका सुशील कोइरालाको कोटरी समकालीन नेपाली सामन्ती राजनीति र गुटीय खेलको अध्ययन गर्ने सन्दर्भ सामग्री हुन् । उनले आफ्नै सरकार ढाल्न हुम्ली चक्रबहादुर शाही र जाजरकोटे दीपक शाहलाई अगाडि सारेका थिए । आफ्नै जिल्लामा भिन्नमतका नेतालाई कुनै स्थान र अवसर नदिँदा कांग्रेसको हविगत के भयो हेर्न बाँके गए हुन्छ । संसदीय चुनावमा राप्रपाको छहारी खोज्नु र रोज्नुप¥यो तर हात लाग्यो– शून्य । फ्रान्सको राजकीय भ्रमण तय भइसकेका कृष्णप्रसाद भट्टराईले टुँडिखेलबाटै राजीनामा घोेषणा गर्नुपरेको उदाहरण ताजै छ । गुट बचाउन खोज्दा कांग्रेसको हविगत जे भयो, त्यो रोग सरकारी नेकपामा अहिले सर्लक्कै सरेको छ ।
महेन्द्र राजशाहीका चतुर राजा हुन् । उनले संसारभरि रहेका योग्य र दक्ष नेपालीलाई देश भिœयाए । वीरेन्द्रको पालामा जस्तो त्यसबेला दरबारमा गुट थिएन । तर अहिलेका नवराजाहरूका सोच, सपना, प्रतिबद्धताको वास्तविकता नियाल्न विदेशयात्रा र गाली गलौज पढ्नुपर्छ ।
ऐतिहासिक परिवर्तनले देश र जनताको महŒवाकांक्षा ह्वात्तै बढायो । अहिले नेतृत्वलाई आफ्नै उपलब्धिको भारी गहुँगो हुँदैछ । पत्यारलाग्दो मार्गचित्र देखिन्न । त्यसैले आफ्नै इतिहास, प्रतिबद्धता, देखाइएका सपना, कोरिएका नक्सा, गाइएका गीतलाई विषयान्तर गर्न नक्कली शत्रु खोज्नु परिरहेको छ । आफ्नैलाई हेप्ने, चेप्ने, समय पाउनेबित्तिकै उडाउने र गुटभित्रै रमाउने भएकाले स्वस्थ आलोचना उनीहरूलाई मुटुमा ठोकेको किलो बन्न पुग्छ । कुनै पनि दिनको तुषको बदला लिने मौका र गल्छेंडो कुरिन्छ । के अहिले देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथले आफ्नो सरकारभित्रैबाट ढालिएको तुष बिर्सिएर रामनामी ओढेका होलान् !
सामन्तको परिचय आर्थिक हैसियतले मात्रै किटान गर्दैन, संस्कृतिमा हुन्छ । आचार, विचार र व्यवहारमा देखिन्छ । सामन्त टुट्न सक्छन् तर झुक्न मान्दैनन् । इख कोखमा साँचेर राखेका हुन्छन् र मौका पाउनेबित्तिकै डस्छन् । पहिलो डसाइ दास नबन्ने आलोचनात्मक चेत र निर्गुटीय कार्यकर्ता बन्छ । तर, पुँजीवादमा यस्तो हुँदैन । योग्य प्रतिस्पर्धी र क्षमताको कदर हुन्छ । आन्दोलनको मर्म सकिएका लालसामन्त र लालगद्दार परम्परागत सामन्तभन्दा पनि विषालु हुन्छन् । कुन रंगको कपडा र ट्रेडमार्क छ भन्ने कुराले व्यक्तिको स्वभाव नियन्त्रण गर्दैन ।
आन्दोलनको औजार र सामुहिक शक्तिको औकात गुमाएका पार्टी कार्यकर्ताले पनि राजनीतिक हैसियत कायम राख्न सक्दैनन् । उनीहरूका योग्यता, क्षमता र दक्षता आधुनिक चाप्लुसतन्त्रले निर्धारण गर्छ । नेतालाई अगुवा साथी मात्र सोचेर चाकडी नबजार्नेले कुनै कार्यकारी भूमिका पाउँदैन, भ¥याङको तल्लोसिँढीमा मात्रै बसेर ताली पड्काउने हैसियतमा पुगिन्छ । तब राजनीतिक सुरक्षाका लागि पनि ऊ गुटमा, कोटरीमा सक्रिय हुने बाध्यता रहन्छ । भुक्तभोगीका भोगाइले भन्छ– पार्टी र विचारभन्दा नेताभक्ति अहिलेको अत्यावश्यक योग्यता हो ।
नेतृत्वमा दायित्व रित्तिएर शक्तिले मैमत्त भएपछि अहंकार जन्मन्छ । ठूला शक्तिबाट स्वयं हेपिएको ख्याल गरिन्न तर अरूलाई हेप्दा, मानमर्दन गर्दा, उछित्तो काढ्दा भने हड्डी खित्खिताउँछ । कसै–कसैका स्वभावै अर्काको दुःखमा तिघ्रा ठटाउने परपीडक हुन्छ । अझ गुटमहात्म्य यति सशक्त हुन्छ कि आफ्नो हित सुरक्षित गर्न नसके पनि अर्काका योजनालाई ध्वस्त गर्न र रोक्न भने सक्छ । चेतहीन लम्पटदास उम्दा सहयोगी बनिदिन्छन् । आन्दोलन बाँकी नरहेको पार्टीमा राजनीतिक सुरक्षा चम्चागिरी कलामा निहित रहन्छ । यिनीहरूका बाइबल, गीता र कुरान भनेकै भतृहरि, चाणक्य, मेकियाबेली र हेनरी किसिन्जरगाथा हुने गर्छन् ।
सक्रियताका लागि प्रतिस्पर्धीको आवश्यकता हुन्छ । त्यसले उसलाई बाठो बनाउन, सक्रिय पार्न, नयाँ लक्ष्य तय गर्न प्रोत्साहित बनाउँछ । प्रतिस्पर्धा उम्दा ठहरिनु हो, इख र बदला हैन । इख र बदला केही निजी हुन्छन् । मानवीय गुणका दायित्वबोधले इख होइन, जीवन र जगत् नियाल्न हौस्याउँछ र मानवताको रक्षा गर्न, आन्दोलित बन्न प्रोत्साहित गर्छ भने अहंकारसिर्जित इखले घर पोलेर आगो ताप्छ । समयमै चेत भया !
सर्वोच्चबाट ८ जना पक्राउ, वकिलहरुको धर्ना जारी
अनटेस्ट सवारी चालकहरुको मृत्यु
डोरमणि र दिपकले अत्तो थापे अष्टलक्ष्मी कात्तिक १० गते बर्खास्त हुने
बाढी पहिरोबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या १०० नाघ्यो,११ सय बढी घरपरिवार विस्थापित
लागुऔषधसहित पक्राउ परेका संक्रमित फरार, आज फेरि समातिए
बालकोटमा ट्याक्टर दुर्घटना,एक ठहरै
महाकालीमा तुईन चुँडालिएको बिरुद्ध गोंगबुमा प्रतिकार
पूर्वराजाको जन्मदिनमा राजसंस्था पुनःस्थापनाको माग
मन्त्री श्रेष्ठविरुध्द अदालत पुगिन् रुपा सुनार